အနုမြူသီအိုရီအက်တမ်, ကိစ္စများ၏အဆောက်အဦလုပ်ကွက်၏သဘောသဘာဝဖော်ပြသည်။ artpartner-ပုံရိပ်တွေ / Getty Images
အနုမြူသီအိုရီသဘောသဘာဝတစ်သိပ္ပံနည်းကျဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် အက်တမ်၏ နှင့် ကိစ္စ ။ ဒါဟာရူပဗေဒ, ဓာတုဗေဒနှင့်သင်္ချာ၏ဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်။ ခေတ်သစ်သီအိုရီအရ, ကိစ္စတက်လုပ်အလှည့်နေသောအက်တမ်ဟုခေါ်တွင်အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်၏ဖန်ဆင်းထားသည် subatomic particles ၏ ။ ပေးထားသော၏အက်တမ် ဒြပ်စင် အများအပြားအရိုအသေအတွက်တူညီနှင့်အခြားဒြပ်စင်၏အက်တမ်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အက်တမ်ပေါင်းစပ် fixed အချိုးအစားအတွက် ဖွဲ့စည်းအခြားအက်တမ်များနှင့် မော်လီကျူး များနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများ။
သီအိုရီခေတ်သစ် quantum mechanics ရဲ့ရန် Atom ၏အတွေးအခေါ်ကနေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤတွင်အနုမြူဗုံးသီအိုရီတစ်ခုသမိုင်းအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Atom နှင့် Atom
သီအိုရီရှေးခေတ်အိန္ဒိယနှင့်ဂရိနိုင်ငံအတွက်အတွေးအခေါ်အယူအဆအဖြစ်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစကားလုံးအက်တမ် "ခွဲခြား" ဆိုလိုတာက, ရှေးဟောငျးဂရိစကားလုံး atomos ကနေလာပါတယ်။ Atom အဆိုအရကိစ္စ discrete မှုန်ပါဝင်သည်။ သို့သော်သီအိုရီကိစ္စများအတွက်အများအပြားရှင်းပြချက်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်ပေါ်အခြေမခံခဲ့သည်။ ပဉ္စမရာစုဘီစီခုနှစ်, ဒီမိုကကိစ္စအက်တမ်ဟုခေါ်တွင် indestructible, ခွဲခြားယူနစ်ပါဝင်သည်အဆိုပြုထား။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားများအတွက်အမှောင်ခေတ်မှတဆင့်ကျန်ရစ်ဒါရောမကဗျာဆရာ Lucretius, စိတ်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
18 ရာစုအထိ, အက်တမ်၏တည်ရှိမှုအဘို့အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားရှိ၏။ အဘယ်သူမျှမခှဲဝေနိုင်ပုံကိုထုကိစ္စသိတယ်။ Aeriform / Getty Images
ဒါဟာအက်တမ်၏တည်ရှိမှု၏ကွန်ကရစ်သက်သေအထောက်အထားများကိုသိပ္ပံများအတွက် 18 ရာစုအဆုံးအထိယူခဲ့ပါတယ်။ Antoine Lavoisier တစ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ထုတ်ကုန်များအစုလိုက်အပြုံလိုက် reactants ၏ဒြပ်ထုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့ဖော်ပြသည်သော 1789 ခုနှစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၏တရားရေးဆွဲပြီး။ ယောသပ်သည်လူးဝစ် Proust တစ်ဦးဝင်းအတွင်းဒြပ်စင်များ၏ထုကအမြဲအတူတူပင်အချိုးအစားအတွက်ပေါ်ပေါက်မှာဒီလိုဖော်ပြထားသည့် 1799 ခုနှစ်နှင့်အချိုးအစား၏တရားအဆိုပြုထား။ ဤရွေ့ကားသီအိုရီအက်တမ်ကိုးကားခဲ့ပါဘူး, သေးယောဟနျသ Dalton တစ်ဦးဝင်းအတွင်းဒြပ်စင်၏ထုများ၏အချိုးအသေးတပြင်လုံးကိုဂဏန်းများမှာဤသို့ဖော်ပြသည်ရာမျိုးစုံအချိုးအစား၏ပညတ်တရားကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူတို့အပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ မျိုးစုံအချိုးအစား၏ Dalton ရဲ့တရားစမ်းသပ်ဒေတာကနေဆွဲငင်။ သူကတစ်ဦးချင်းစီဓာတုဒြပ်စင်ဆိုဓာတုဖွငျ့ဖကျြဆီးခံရမပေးနိုငျသောအက်တမ်၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားပါဝင်ပါသည်အဆိုပြုထား။ မိမိအခံတွင်းတင်ဆက်မှု (1803) နှင့်ထုတ်ဝေ (1805) ကိုသိပ္ပံနည်းကျအနုမြူဗုံးသီအိုရီရဲ့အစမှတ်သား။
1811 ခုနှစ်, Amedeo Avogadro သူတန်းတူအပူချိန်နှင့်ဖိအားအမှုန်၏တူညီသောအရေအတွက်ကမဆံ့မှာဓါတ်ငွေ့၏တန်းတူ volumes ကိုအဆိုပြုသည့်အခါ Dalton ရဲ့သီအိုရီတွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုတညျ့။ Avogadro ၏တရားတိကျစွာဒြပ်စင်၏အက်တမ်ထုခန့်မှန်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းနှင့်အက်တမ်နှင့်မော်လီကျူးများအကြားတွင်ခြားနားချက်များရှိခဲ့ပါသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အနုမြူဗုံးသီအိုရီမှနောက်ထပ်သိသာအလှူငွေရေထဲမှာမျောဖုန်မှုန့်အမှုန်အဘယ်သူမျှမလူသိများအကြောင်းပြချက်ကျပန်းရွှေ့ဖို့သလိုပဲသတိပြုမိသူကိုရုက္ခဗေဒပညာရှင်ရောဘတ်ဘရောင်းက 1827 ခုနှစ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ 1905 ခုနှစ်တွင်အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းဟာ Brownian ရွေ့လျားမှုရေမော်လီကျူး၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည် postulated ။ ဂျင်း Perrin နေဖြင့် 1908 ခုနှစ်မော်ဒယ်နှင့်၎င်း၏ validation ကိုအနုမြူဗုံးသီအိုရီများနှင့်အမှုန်သီအိုရီထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
Plum Pudding မော်ဒယ်နှင့်ရပ်သဖော့ဒမော်ဒယ်
ရပ်သဖော့ဒအီလက်ထရွန်ကြယ်ကမ္ဘာဂြိုလ်နဲ့တူနေတဲ့နျူကလိယကမ္ဘာနှင့်အတူအက်တမ်တစ်ဦးဂြိုဟ်မော်ဒယ်အဆိုပြုထား။ MEHAU KULYK / သိပ္ပံ PHOTO စာကြည့်တိုက် / Getty Images
ဒီပွိုင့်မှတက်, အက်တမ်ကိစ္စ၏အသေးငယ်ဆုံးယူနစ်ဖြစ်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ 1897 ခုနှစ်, JJ Thomson အဆိုပါအီလက်ထရွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကအက်တမ်ပိုင်းခွဲနိုင်ယုံကြည်သည်။ အဆိုပါအီလက်ထရွန်အနှုတ်တာဝန်ခံသယ်ဆောင်သောကြောင့်, သူအီလက်ထရွန်တစ်ခုလျှပ်စစ်ကြားနေအက်တမ်လိုက်လျောဖို့အပြုသဘောတာဝန်ခံတစ်ဦး၏အလေးချိန်မှာ embedded ခဲ့ကြသည်သောအက်တမ်၏တစ်ဦးဇီးသီး pudding မော်ဒယ်အဆိုပြုထား။
Ernest Rutherford, သွန်မ်ဆင်၏ကျောင်းသားတစ်ဦး, 1909. တွင် Rutherford အတွက်ဇီးသီး pudding မော်ဒယ်တစ်ဦးအက်တမ်များ၏အပြုသဘောဆောင်တာဝန်ခံတွေ့ရှိခဲ့နှင့်၎င်း၏ဒြပ်ထုအများစုအနေနဲ့အက်တမ်၏ဗဟိုသို့မဟုတ်နျူကလိယမှာ disproved ။ သူဟာအီလက်ထရွန်သေးငယ်တဲ့အပြုသဘော-တရားစွဲဆိုနျူကလိယ orbited ရသောတစ်ဦးဂြိုဟ်မော်ဒယ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ Atom ၏ Bohr မော်ဒယ်
အဆိုပါ Bohr မော်ဒယ်အဆိုအရ, အီလက်ထရွန် discrete စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်မှာနျူကလိယလှည့်ပတ်။ မာကု GARLICK / SPL / Getty Images
ရပ်သဖော့ဒညာဘက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကား, မိမိမော်ဒယ်အက်တမ်၏ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများရှင်းပြနိုင်ဘူးမဟုတ်သလိုအဘယ်ကြောင့်အီလက်ထရွန်ဟာနျူကလိယသို့ crash ခဲ့ပါဘူး။ 1913 ခုနှစ်, Niels Bohr သာနျူကလိယကနေတိကျတဲ့အကွာအဝေးမှာနျူကလိယလှည့်ပတ်အီလက်ထရွန်ကဤသို့ဆိုပြီးသော Bohr မော်ဒယ်အဆိုပြုထား။ မိမိအမော်ဒယ်အဆိုအရ, အီလက်ထရွန်ဟာနျူကလိယသို့လိမ်လို့မရဘူး, ဒါပေမယ့်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်အကြားကွမ်တမ်ခုန်စေနိုင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်အက်တမ်သီအိုရီအရတစ်ဦးအီလက်ထရွန်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးအက်တမ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အဲဒါကိုတစ်ဦးစွမ်းအင်အဆင့်ကို၌တည်ရှိ၏အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေပါပဲ။ ဂျေမီ Farrant / Getty Images
Bohr ရဲ့မော်ဒယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ရောင်စဉ်တန်းကရှင်းပြသည်, ဒါပေမယ့်မျိုးစုံအီလက်ထရွန်နှင့်အတူအက်တမ်၏အပြုအမူမှတိုးချဲ့ဘဲနေ၏။ အများအပြားကရှာဖွေတွေ့ရှိအက်တမ်၏နားလည်မှုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ 1913 ခုနှစ်တွင်ဖရက်ဒရစ် Soddy နျူထရွန်၏ကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များကိုပါရှိသောကြောင့်တဦးတည်းဒြပ်စင်၏အက်တမ်၏ပုံစံများသောအိုင်ဆိုတုပ်, ဖော်ပြခဲ့သည်။ နျူထရွန် 1932 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လူးဝစ်က de Broglie Erwin Schrodinger Schrodinger ရဲ့ညီမျှခြင်း (1926) ကို အသုံးပြု. ဖော်ပြထားသည့်အမှုန်, ရွေ့လျားတစ်လှိုင်းကဲ့သို့အပြုအမူအဆိုပြုထား။ ဒီအလှည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ပြိုင်နက်တစ်ဦးအီလက်ထရွန်၏အနေအထားနှင့်အရှိန်အဟုန်နှစ်ဦးစလုံးသိရန်မဖြစ်နိုင်ပါင်ကဤသို့ဆိုပြီးသော Heisenberg မသေချာမရေရာမှုနိယာမ (1927), မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
quantum mechanics အက်တမ်ငယ်များအမှုန်ထားရှိရေးအတွက်တစ်ဦးအက်တမ်သီအိုရီကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအီလက်ထရွန်အလားအလာဘယ်နေရာမှာမဆိုအက်တမ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်တခုအနုမြူဗုံး Orbital သို့မဟုတ်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ဖော့ဒျရဲ့မော်ဒယ်၏ယင်းအစားထို့နောက်မြို့ပတ်ရထားပတ်လမ်း, ခေတ်သစ်အက်တမ်သီအိုရီကိုအီလက်ထရွန်၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူအက်တမ်သည်စသည်တို့ကို, shaped အလင်းဆုံ, စကားမပြောနိုင်သောခေါင်းလောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ Orbital ဖော်ပြထားတယ်သည့်အမှုန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးအမြန်နှုန်းရွေ့လျားနေကြသည်ကတည်းက Relativistic သက်ရောက်မှု, ပြဇာတ်သို့ရောက် အလင်း၏အမြန်နှုန်း၏အစိတ်အပိုင်း။ အက်တမ်ကိုမဆိုဓာတုနည်းလမ်းများသုံးပြီးပိုင်းခွဲမရနိုငျသောကိစ္စများ၏အသေးငယ်ဆုံးယူနစ်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်များ, သေးငယ်သည့်ပရိုတွန်တက်စေမှုန်, နျူထရွန်, အီလက်ထရွန်တွေ့ပြီ။
ဓာတုဗေဒလေ့လာမှ Flash ကိုကဒ်များကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Pascal မှ Square ကိုလက်မသို့မဟုတ် PSI Per ပေါင် converting
Square ကိုလက်မသို့မဟုတ် PSI Per ပေါင်မှလေထု converting
Cyanide ကိုဘယ်လိုသတ်ပါသလား Cyanide အဆိပ်၏ဓာတုဗေဒ
ဘယ်လို Sarin ဓာတ်ငွေ့အကငျြ့
Pascal မှ (ပမှ ATM) လေထု converting
Paramagnetism နှင့် Diamagnetism ပြဿနာအလုပ်လုပ်ခဲ့
ဟောငျးအလုပ်အကိုင်၏အဘိဓါန် - တစ်ဦးနှင့်အတူစတင်ဒါကအလုပ်အကိုင်
ထိပ်တန်း6နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအယူဝါဒ
လက်တင်မတ်ေတာသ Elegy ၏ကဗျာဆရာတွေ
အဆိုပါနှာမောင်းဂိမ်းအတွက် Junk '' ဒါဟာအနိုင်ရမည်ဟုဖို့မိနစ် ''
အဆိုပါ Hybrid ကိုပေါ့ပလာပင်
'' to'-Infinite ၏ Grammar
ဒါဝိဒ်သည်ရီကာဒို၏ဘဝနှင့်အလုပ်လုပ် - ဒါဝိဒ်သည်ရီကာဒို၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
က Hip-Hop နဲ့သမိုင်းအတွက် 10 အကောင်းဆုံး Rap ဂီတစစျပှဲမြား
CSUSM, Cal ပြည်နယ်စန်းမားကို့စ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Utah ကျောင်းသားများ, K သည်-12 အခမဲ့အွန်လိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းများများစာရင်း
Aishes Chayil ကဘာလဲ?